Mba hahazoana misarona ianao.
Ny Tarpaulins dia ampiasaina amin'ny fomba maro hiarovana ny olona sy ny zavatra amin'ny rivotra, ny orana ary ny tara-masoandro. Izy ireo dia ampiasaina mandritra ny fanamboarana na aorian'ny loza hiarovana amina tranobe na namboarina ampahany, mba hialana amin'ny korontana mandritra ny fandokoana sy ny hetsika mitovy, ary ny fanangonana sy ny fanangonam-potaka. Izy ireo dia ...
Fomba fanamboarana lamba fonenana tsara kokoa
Fonosom-trano, fantatra ihany koa amin'ny fonosan'ny mpivarotra haino aman-jery amin'ny ankapobeny dia manondro fitaovana synthetic ampiasaina amin'ny fiarovana ny tranobe. Ny fonosan'ny tranobe dia miasa toy ny sakana manohitra ny toetr'andro, manakana ny orana tsy hiditra amin'ny fivorian'ny rindrina raha mamela ny setroka rano mankany ivelany. Raha mamontsina ...
Teknolojia maoderina no mampiorina kokoa ny roofers.
Ny fanitsakitsahana dia singa tsy hita maso nefa manan-danja tokoa amin'ny rafitra vita amin'ny tafo ankehitriny. Izy io dia ny takelaka vita amin'ny rano tsy miaro amin'ny rindrina amin'ny fiarovana ny tafo na substrate amin'ny fidiran'ny rano, raha toa ka misy fahasimbana ny takelaka ivelany. Fanamboarana tafo fanetren-tena no natao indrindra ...